Ruush Beleruusiyaan Yukreeniyaan Polish Serbian Bulgaria Slovakia Czech Romania Moldovian Asebajaan Ermeni Albaaniyaan Avar Bashkir Tatar Chechen Isloofiniyaan Croatian Istooniyaan Laatfiyaan Lithuanian Hangariyaan Kyrgyz Uzbek Tajik Turkmen Finnishka Noorwiijiga Iswiidishka Ayslandays Giriig Macedonian Cibraaniga Jarmal Holland Deenish Welish Gaelic Irish Faransiis Basquu Catalan Talyaani Isbaanish Guarani Jamaica Boortaqiis Nahuatl Kiche Q'eqchi Quechuan Cusub Sjælland Malaysian Papua New Guinea Turki Hindi Burma Chin Nebali Sugbaano Tagalog Kamboodiya Kazakhstan Taay Afrikaanays Xhosa Sulu Ndebele Sotho Amhar Wolaytta Nigeria Ika Dinkaha Algeria Sabeenood Sawaaxili Marooko Soomaaliya Shona Madagascar Romani Gambia Kurdishka Yoruba Kenya GIKCL Kinyarwanda Haiti Bengali Urdu Carabi Iiraani Uyghur Indonesia Fiitnaamiis Shiinaha Jabbaan Mongolian Kuuriyaan Ingiriisi Aramaatiga Laatiin Isberento Coptic
Bil Bax Laaw Lamb ShKu Yas Gar Ruu 1Sam 2Sam 1Bo 2Bo 1Ta 2Ta Ces Nex Est Ayu Sab Maa Wac GaSu Ish Yer Bar Eze Daa Hoo Yo Caa Cob Yoo Mii Nax Xab Sef Xag Sek Mal Mat Mark Luk Yoo FaRa Roo 1Kor 2Kor Gal Efe Fil Kol 1Tes 2Tes 1Tim 2Tim Tii Fil Cib Yac 1But 2But 1Yox 2Yox 3Yox Yuu Muu
Markay reer binu Israa'iil Masar ka soo bexeen, Oo ay reerkii Yacquub dad af qalaad ka soo bexeen,
Ayaa Yahuudah noqday meeshiisa quduuska ah, Israa'iilna noqday meeshuu u talinayay.
Baddii way aragtay, wayna carartay, Webi Urdunna dib baa loo celiyey.
Buurihii waxay u boodboodeen sidii wanan, Kurihiina sidii baraar.
Baddoy, bal maxaa kugu dhacay oo aad u cararaysaa? Webi Urdunow, maxaad dib ugu noqonaysaa?
Buurahow, bal maxaad ugu boodboodaysaan sida wanan? Kuraha yaryarow, bal maxaad ugu boodboodaysaan sida baraar?
Dhulkow, ku gariir Sayidka hortiisa, Ilaaha reer Yacquub hortiisa ku gariir,Kaas oo dhagaxii u beddelay balli biyo ah, Oo dhagaxmadowgiina u beddelay il biyo ah.
Kaas oo dhagaxii u beddelay balli biyo ah, Oo dhagaxmadowgiina u beddelay il biyo ah.